Home Wararka Al Shabaab oo shalay dad soomanaa xoog ku afuriyay, kuna qasbay in...
Al Shabaab oo shalay dad soomanaa xoog ku afuriyay, kuna qasbay in ay dukadaan salaada ciida
Waxaa shalay ka dhacay Gobolka Shabeelada Dhexe qiso cajiib noqotay, taas oo dad daban ku tilmaameen mucjiso rabaani ah. Dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa shalay subax xoog soonka uga furay dadka ku nool degaanka Warciise oo ku yaalla duleedka degmada Jowhar ee gobalka Shabeellada Dhexe, waxaana halkaasi ka dhacay arrin la yaab ah.
Dad ku sugnaa goobta ay qisadu ka dhacday ayaa sheegay in Al-Shabaab ay qasab biyo ku siiyeen dad soomanaa kadibna waxaa la isugu geeyay masjid cusub oo laga dhisay degaanka, kaas oo ka sameysnaa Bulkeeti. Masjidka oo bilooyin ka hor la dhisay ayaa dumay markii ay Takbiirta ka billaabeen Al-Shabaab, islamarkaana dad aan badneyn qasab loo geeyay si Salaada Ciidda ugu Tukadaan.
Dhanka kale cumulo lagu kalson yahay oo lagu qasbay in ay furaan soonkooda ayaa sheegay in Masjidka uu ka dumay laba qeybood, waxaana wax ku noqday dhowr dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab. Arrintaan la yaab ku noqotay dadka degaanka waxaana aad looga hadal hayaa gobalka Shabeellada Dhexe, ayada oo dadka qaar ay ku tilmaameen mucjiso lagu tusayey Al-Shabaab in cidda ay shalay ciideen ay aheyd mid qaldan.